सबै कुरा राम्रो संग जान को लागी प्रार्थना। ? काम र एक परीक्षण मा।
प्रार्थना गर्नुहोस् ताकि सबै ठीकठाक होस् काम वा परीक्षणमा यो विश्वासको साँचो कार्य हो।
धेरै चोटि यो विश्वास गरिन्छ कि यो एउटा निराश कार्य हो वा यसले हामी आफैले कार्य गर्न कमजोरी वा असक्षमता देखाउँदछ, तर यो थोरैमा पनि सत्य हुँदैन।
ईश्वरीय समर्थनको आवश्यकताले देखाउँदछ कि हामी आत्मिक प्राणी हौं र हामी सबैजना हाम्रो चिन्ताको विषय भएको वा हामी नयाँ व्यापार सुरु गर्न लागेका छौं भनेर चाहन्छौं।
सबै भन्दा सल्लाहकार कुरा यो प्रार्थना दिनको तीन पटक गर्नु हो, तपाईं यसलाई आफूले चाहेको दिनहरू विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ।
यो केवल तीन दिनको साथ पर्याप्त हुन सक्छ वा अनुरोध तपाईंले केही दिनहरू आवश्यक पर्दछ।
सत्य यो हो कि प्रार्थनाको लागि प्रभावकारी हुनको लागि मात्र यो आवश्यक विश्वासको साथ हो।
1 सबै कुरा राम्रोसँग जानको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् - उद्देश्य
1.1 प्रार्थना गर्नुहोस् ताकि सबै काममा राम्रोसँग सकून्
1.2 प्रार्थना गर्नुहोस् ताकि सबै एक परीक्षणमा राम्रोसँग जान सकोस्
1.3 प्रार्थना गर्नुहोस् ताकि एक अपरेशनमा सबै कुरा ठीकठाक होस्
2 प्रार्थना काम गर्न कति समय लाग्छ?
सबै कुरा राम्रोसँग जानको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् - उद्देश्य
यस वाक्यको उद्देश्य एकदम स्पष्ट छ र सबै सम्भावित केसहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ.
धेरै पटक हामी नयाँ प्रोजेक्ट सुरू गर्दैछौं जसमा हामी सयौं प्रतिशत पक्का छैनौं तर हामी अझै प्रयास गर्न चाहन्छौं, किनभने ती अवस्थाहरूमा यो प्रार्थना यो महत्त्वपूर्ण छ।
हामीले गर्ने कुराको लागि डो God्याइको लागि वा उहाँलाई सही र सही काम गर्न मदतको लागि परमेश्वरलाई सोध्नु महत्त्वपूर्ण छ।
नयाँ उद्यमहरू अध्ययनको क्षेत्रमा पनि हुनसक्दछन्, जहाँ भगवानको अनुग्रह सधैं लाभदायक हुन्छ।
वा हामी भन्न सक्दछौं कि सर्वोच्चले हामीलाई सम्बन्धमा जारी राख्न मद्दत गर्दछ जुन अचानक अनावश्यक बारीकियां लिन्छ।
फन मा, त्यो प्रार्थना ताकि सबै चीज राम्रो होस् धेरै केसहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो सम्पूर्ण परिवारको साथ गर्न सकिन्छ र यस तरिकामा, सबै सँगै एकै उद्देश्यको लागि सोध्नुको साथ, प्रार्थना अझ शक्तिशाली हुन्छ।
याद गर्नुहोस् कि परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि यदि दुई वा तीन जनाले परमेश्वरलाई बिन्ती गरेमा उनले अनुरोधहरू अनुमोदन गर्नेछन्।
प्रार्थना गर्नुहोस् ताकि सबै काममा राम्रोसँग सकून्
“हे भगवान, म तपाईंलाई अनुरोध गर्दछु कि जब तपाईं मेरो काममा प्रवेश गर्नुहुन्छ तपाईंको सार उपस्थित छ, म तपाईंको उपस्थितिलाई बिन्ती गर्दछु तपाईंले मलाई दिनभएको यो नयाँ दिनको लागि धन्यवाद। म तपाईंलाई भन्छु कि यो शान्तिको दिन हो र तपाईंको अनुग्रह, तपाईंको कृपा, तपाईंको प्रेम र सबै कुरा तपाईंको पूर्ण योजना अनुसार घट्छ।
आज, म सोध्छु कि मेरा सबै प्रोजेक्टहरू सञ्चालन भैसकेका छन्, मेरो विचारहरू गरिन्छ र मेरो जीवन र क्यारियरमा भएका साना उपलब्धिहरू पनि तपाईंको गौरवशाली गवाहीको अंश हुन्।
प्रभु येशू, मेरो कामलाई धन्यबाद दिनुहोस्, मेरा मालिकहरू, मेरा ग्राहकहरू, मेरा सहकर्मीहरू र यस कम्पनीको समृद्धि गर्ने सबै व्यक्तिहरू।
स्वर्गीय पिता, मेरो इच्छा र मेरो शक्ति राम्रो तरीकाले मेरो काम गर्न को लागी नवीकरण गर्नुहोस्।
यो दिन, म दयालु हृदयका साथ मेरा ग्राहकहरु र सहकर्मीहरुलाई सधैं दयालु भई सेवा गर्न चाहन्छु। प्रभु, मलाई एक मुस्कुराउने मुख, एक आशावादी दिमाग र आँखाहरू दिनुहोस् जुन उनीहरूले तपाईंको वरिपरिको सबै कुराको महत्त्व दिन्छन्।
मबाट आपत्तिजनक शब्द हटाउनुहोस् र मलाई राम्रो व्यक्ति बनाउनुहोस्।
मलाई दुई हात दिनुहोस् जुन सँधै मेरो परिवारको सम्मान गर्दछ, मलाई दिनहुँ एक मुस्कानको साथ उठ्ने उत्साह दिनुहोस्।
प्रभु, मलाई हर पल मा मार्गदर्शन गर्नुहोस् कि म उत्तर गुमाएको महसुस गर्दछु, मेरो शक्ति र मेरो साहस बन्नुहोस्, मलाई तपाईंको जस्तो वीर मन दिनुहोस्।
स्वर्गीय फादर भगवान, यस दिन र हरेक कामको दिनलाई सबैभन्दा उत्तम बनाउनुहोस्, मलाई तपाईंको हातबाट लिनुहोस्।
त्यहाँ काम वातावरण वा नयाँ काम चुनौतिहरू छन् जसलाई निस्सन्देह प्रार्थनामा अतिरिक्त मद्दत चाहिन्छ।
सोध्नुहोस् सबै काममा राम्रोसँग जान्छ यो एक प्रार्थना हो कि यो हरेक दिन गर्न सकिन्छ, घर छोड्नु भन्दा पहिले।
हामी घरमा लागू गर्न सक्दछौं भन्ने एक राम्रो परम्परा बिहान सबैलाई घर छोड्नु अघि एक दिन एक प्रार्थना प्रार्थना गर्नु हो।
यस प्रकार हामी साना बच्चाहरूलाई वा विश्‍वासमा कमजोर भएका मानिसहरूलाई प्रार्थनाको शक्तिमा विश्वास गर्न मद्दत गर्दछौं।
प्रार्थना गर्नुहोस् ताकि सबै एक परीक्षणमा राम्रोसँग जान सकोस्
“धन्य न्यायकर्ता, मेरी छोरा, मेरो शरीर चकित हुन वा मेरो रगत बगिनोस्। जहाँ म जान्छु, तपाईंको हातले मलाई समात्दछ।
मलाई नराम्रोसँग हेर्न चाहने मानिसका आँखाहरू छन् र मलाई देख्दैनन्, यदि तिनीहरूसँग हतियारहरू छन् भने तिनीहरूले मलाई चोट पुर्याउँदैनन्, र अन्यायमा तिनीहरू मलाई डो .्याउँदैनन्।
येशूलाई छोपिएको आवरणको साथ अब म लपेटेको छु, ताकि मलाई न त चोट पुर्याउन न मार्न सक्छ, न जेलमा म हराउन सक्दछु। पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको छेदनद्वारा।
कानुनी मुद्दा सामना गर्नु धेरै ध्यान र चिन्ताको समय हो जहाँ सबै कुरा राम्रोसँग जानको लागि प्रार्थना एकदम सहयोगी हुन सक्छ।
नकारात्मक उर्जाहरू च्यानल गर्न सक्षम हुन र वातावरणमा सकारात्मक व्यक्तिहरूलाई उपयुक्त बनाउन सक्षम हुने जहाँ चरम तहमा भनिने र गरेको सबै कुरा हाम्रो ध्यानमा राखिन्छ।
तपाईं अघि र समयमा प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ परिक्षणयो त्यस्तो कार्य हो जसले हामीलाई शान्ति कायम गर्न र राम्रो निर्णय लिन मद्दत गर्दछ।
प्रार्थना गर्नुहोस् ताकि एक अपरेशनमा सबै कुरा ठीकठाक होस्
हे येशू, तपाईं साँचो वचन हुनुहुन्छ, तपाईं जीवन, ज्योति हुनुहुन्छ, तपाईं हाम्रो बाटो हुनुहुन्छ, येशू, मेरो प्यारो प्रभु, जसले भन्नुभयो: "माग्नुहोस् र यो तपाइँलाई दिइनेछ, खोज्नुहोस् र तपाइँ भेट्टाउनुहुनेछ, ठोक्नुहोस् र यो तपाइँ को लागी खोलिनेछ, "मेरी मेरी धन्य आमा को मध्यस्थता, मँ कल गर्छु, म खोज्छु, म तिमीलाई सबै आशा संग सोध्छु कि तपाइँ मलाई दिनुहुन्छ कि मलाई तत्काल चाहिन्छ: (भन्नुहोस् तपाइँ के हासिल गर्न चाहानुहुन्छ)। तीन हाम्रा बुबाहरू, तीन हेल मरियमहरू र तीन महिमाहरू प्रार्थना गर्नुहोस्।
हे येशू, तपाईं जीवित परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईं परमेश्वरको विश्वासी साक्षी हुनुहुन्छ संसारतपाईं हामी संग भगवान हुनुहुन्छ, प्रभु प्रभुहरु को प्रभु, जसले भन्नुभयो "मेरो नाम मा बुबाले जे पनी उहाँले तपाइँलाई दिनुहुन्छ" मेरी मरियम, तपाइँको धन्य आमा को मध्यस्थता को माध्यम बाट, म विनम्रतापूर्वक र मेरो सारा हृदयले अपार विश्वास संग बिन्ती गर्दछु बुबा तपाइँको नाम मा कि तपाइँ मलाई यो अनुग्रह दिनुहुन्छ कि मलाई मेरो कमजोर माध्यम बाट प्राप्त गर्न को लागी धेरै गाह्रो लाग्छ: (तपाईं के प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ ठूलो आशाको साथ दोहोर्याउनुहोस्)। तीन हाम्रा बुबाहरू, तीन हेल मरियमहरू र तीन महिमाहरू प्रार्थना गर्नुहोस्।
हे येशू, तपाईं मरियमको छोरा हुनुहुन्छ, तपाईं दुष्टको विजयी हुनुहुन्छ र मृत्युतिमी आरम्भ र अन्त्य हौ, येशू, राजाहरुका राजा, जसले यसो भन्नुभयो: "स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ, तर मेरो वचन बितेर जानेछैन" मेरी धन्यबाद आमा, मेरी मध्यस्थता को माध्यम बाट, मलाई पूर्ण विश्वास छ कि मेरो हताश निवेदन दिइनेछ: (अनुरोध फेरि असीम भक्ति संग भन्नुहोस्)।
अपरेटिंग कोठामा पस्नु अघि त्यहाँ के हुन्छ भनेर थाहा नहुने डर सधै रहन्छ, त्यसैले प्रार्थना गर्दा अपरेशन र सम्पूर्ण प्रक्रिया राम्रो हुनु महत्त्वपूर्ण छ।
सबै भन्दा सिफारिस गरिएको हो अपरेटिंग कोठामा प्रवेश गर्नु अघि बिरामीसँग यो प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईले सकारात्मक भन्नु पर्छ र हामी जे हेर्न चाहन्छौं त्यससँग प्रत्यक्ष हुनुपर्दछ।
अन्तमा, धन्यवाद दिन को लागी राम्रो छ, यस तरिकाले राम्रो उर्जा सार्दछ जुन सबै स्वास्थ्य प्रक्रियाहरुमा महत्वपूर्ण छ।
प्रार्थना काम गर्न कति समय लाग्छ?
प्रार्थनाहरूको निश्चित समय हुँदैन।
सामान्यतया, स्थितिमा निर्भरता, यसले केहि मिनेट वा अपरेशनमा केहि घण्टा लिन सक्दछ।
महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि तपाईं पक्का हुनुहुन्छ कि तपाईं राम्रोसँग दौडनुहुनेछ।
यस तरिका मा, प्रार्थना ताकि सबै काममा राम्रो साथ जान, न्याय र अपरेशन छिटो काम गर्दछ र प्रभावकारी।